ESI TINYE YANDEX.MAIL NA IPHONE - YANDEX - 2019
Esi tinye Yandex.Mail na iPhone
Maka motherboard dịka ngwaọrụ nke jikọtara ngwaike ngwanrọ nke PC na otu usoro ọrụ, a na-achọkwa nkwado software n'ụdị ndị ọkwọ ụgbọala. Site na ASUS P5B dị ka ịchọta ha abụghị ihe siri ike, mgbe ahụ, anyị na-elele isi otu esi eme ya.
Chọọ ọkwọ ụgbọala maka ASUS P5B
P5B si ASUS pụta na 2006, nke anyị nwere ike ịme nkwubi okwu dị mfe - a kwụsịrịlarị ngwaahịa a ma ọ bụghị ahịa, a kwụsịrị nkwado ya. N'ihi nke a, nsụgharị ọhụrụ nke arụmọrụ Windows na-ejedebe na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Ya mere, anyị ga-edepụta nhọrọ ọchụchọ ndị ọzọ nwere ike ịbara gị uru.
Mgbe ị na-achọ ịchọta na nbudata ngwanrọ ọ bụla, nhọrọ ziri ezi ga-abụ ịkpọtụrụ onye na-emepụta ọrụ weebụ. N'ihe banyere ASUS, ịkwesịrị ime otu ihe ahụ, ma biko mara na ọ dịghị onye ọkwọ ụgbọala nke onye mmepụta ahụ natara maka nsụgharị karịa Windows 7. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịnwale ịwụnye ha na ọnọdụ mmekọrịta, ma anyị anaghị eme nkwa iji kwado ọrụ ha.
Gaa ASUS ebe nrụọrụ weebụ
Mepee njikọ n'elu, gaa "Ọrụ" site n'ebe ahụ ruo "Nkwado".
Na ibe ọhụrụ ịbanye n'ọhịa ọchụchọ P5b na site na ndepụta ndọpụta, dee kpọmkwem ihe nlereanya nke ngwaọrụ ahụ.
A ga-ebute gị gaa na ngwaahịa ahụ. N'ebe a, ị ga-agbanye gaa taabụ "Ndị ọkwọ ụgbọala na ọrụ".
Kọwaa os gị. Maka Windows Version 8 / 8.1, ị gaghị achọta ndepụta nke nbudata dịnụ ma e wezụga faịlụ ROM na BIOS, nke na-akwado ndị nrụpụta ọhụrụ, na ndepụta nke SSDs a tụrụ aro. N'ebe a, dịka e kwuru na mbụ, ị nwere ike ịnwale iji ọnọdụ nkwadoro mgbe ị wụnye ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụ na-ezo aka na ụzọ ndị ọzọ site na isiokwu a.
Ndị ọrụ nke Windows 7 na n'okpuru na-anọgide ka ịhọrọ uru kwesịrị ekwesị dabere na bit ma budata faịlụ otu n'otu.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọzọ na ụdị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ, ị nwere ike ibudata ma wụnye otu n'ime ndị gara aga, mgbe ị kwetasịrị nke ahụ ezighi ezi. A na-emeghe ndepụta ha na bọtịnụ. "Gosi niile".
Dụpụ zip zip ma gbanye faịlụ ahụ.
Soro ndụmọdụ niile nke Wizard Wụnye ma wụnye ihe niile ibudatara na usoro.
N'ezie, usoro ahụ adịghị ngwa ngwa, ọ dịghịkwa akwado ndị ọrụ nke nsụgharị sistemụ ndị dị ugbu a. Ya mere, dị ka ihe ọzọ, ị nwere ike ịme ụzọ ndị a tụlere n'okpuru.
Iji mee ngwa ma mee ka nchọpụta na nbudata nke ndị ọkwọ ụgbọala dị mfe maka ngwaọrụ ọ bụla, e mepụtara mmemme pụrụ iche. Ha na-arụ ọrụ n'otu ụkpụrụ dị mfe - nyochaa nhazi nghazi PC na ịchọpụta ngwanrọ kwesịrị ekwesị maka ngwaike emelitere. Onye ọrụ ahụ nwere ike ijikwa aka na-achịkwa ọbịbịa na-abịa, na-akwadoghị ma ọ bụ kagbuo nwụnye. Ngwa ndị dị otú ahụ dị mfe iji ma nyere aka wụnye ọ bụla ọkwọ ụgbọala maka sistemụ gị n'otu oge. Anyị ejikọtawo ndepụta nke ha ma kpọọ gị ka ị gụọ ya ma mee nhọrọ.
Ihe kachasị ewu ewu dị n'ụdị ya bụ DriverPack Solution. A na-ewere isi nke ndị ọkwọ ụgbọala ya kachasị dị n'etiti analogs, nke pụtara na ọ na-achọta mmelite ọbụna maka ngwaọrụ ndị a na-amaghị. Maka ndị na-enweghị ọrụ, anyị nwere ntụziaka maka ịrụ ọrụ na usoro a.
Onye na-asọ mpi ọkwọ ụgbọala bụ DriverMax, nke anyị nwekwara isiokwu na-akọwa isi ihe eji eme maka ndị mbido.
Gụkwuo: Imelite ọkwọ ụgbọala site na DriverMax
Ihe edobere na motherboard, dị ka ọ bụla ọzọ, nwere nọmba ngwaike pụrụ iche, nke na-enye ohere gụnyere ịchọta ọkwọ ụgbọala dị mkpa. Ị nwere ike ịhụ ID nke onye ọ bụla n'ime ha "Onye njikwa ngwaọrụ"wee jiri ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa, chọpụta ma budata ihe dị mkpa. N'ikpeazụ, usoro ahụ adịghị ngwa ngwa ma ọ bụghị nke kachasị mfe, Otú ọ dị, ọ nwere ike ịba uru maka nwelite mmelite na ọnọdụ mgbe ọ gaghị ekwe omume ịchọta ngwanrọ n'ụzọ ọzọ.
Usoro 4: Ụdị Windows ngwaọrụ
Windows n'onwe ya nwere ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala, wụnye ihe niile ị chọrọ site na ụlọ ahịa gị. Atụmatụ nke usoro a na-agụnye nkwado nke abụghị ihe niile dịnụ, ntinye nke abụghị nsụgharị ndị dị ugbu a, ma n'otu oge ahụ ọ bụ isi. Nke ahụ bụ, ị gaghị enweta ngwanrọ ndị ọzọ na-enye gị ohere iji nwayọọ nwayọọ jikwaa, dịka ọmụmaatụ, kaadị nchekwa. A na-atụle usoro a n'isiokwu dị iche.
Anyị lere anya ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka ASUS P5B motherboard. Họrọ nri ziri ezi dịka nchọta na mkpa gị.